Njodzi dzinongoitika dzoga—Hadzisi chinhu chichagara chichingoitika
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Mizo Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
UNGATI kudii kana mumwe munhu akakuudza kuti, “Munguva pfupi iri kuuya kuchange kusisina njodzi?” Zvimwe ungati, “Asi uri kurota? Njodzi dzagara dzinongoitika.” Kana kuti ungafunga kuti, ‘Waari kuda kunyengedza ndiani?’
Kunyange zvazvo zvichiita sokuti njodzi dzicharamba dziriko nokusingaperi, tine tarisiro yakasimba yokuti dzichapera. Asi vanhu havasivo vachadzipedza. Vanhu havagoni kunyatsonzwisisa kuti sei uye nei zvinhu izvozvo zvichiitika, ndoda kuzvipedza. Mambo weIsraeri yekare Soromoni uyo aiva nembiri yokuchenjera uye yokunyatsoongorora zvinhu, akanyora kuti: “Vanhu havagoni kuziva basa rakaitwa pasi pezuva; zvisinei nokuti vanhu vanoramba vachishanda zvakaoma sei kuti vatsvake, asi havazivi. Kana vakati vakachenjera kwazvo zvokuti vanoziva, havangakwanisi kuziva.”—Muparidzi 8:17.
Kana vanhu vasingagoni kupedza njodzi dzinongoitika dzoga, saka ndiani anokwanisa? Bhaibheri rinoti Musiki wedu ndiye achaita izvozvo. Ndiye akasika nyika nezvinhu zviri mairi zvinosanganisira mafambiro anoita mvura kuti izonaya. (Muparidzi 1:7) Uyewo Mwari akasiyana chaizvo nevanhu pakuti ane simba risingaperi. Muprofita Jeremiya akatsigira pfungwa iyoyo paakati: “Haiwa, Changamire Ishe Jehovha! Tarirai makaita matenga nenyika muchishandisa simba renyu guru noruoko rwenyu rwakatambanudzwa. Chinhu chacho hachina kukuomerai.” (Jeremiya 32:17) Sezvo Mwari ari iye akasika nyika nezvinhu zviri mairi, zvine musoro kuti titaure kuti anoziva zvaangaita kuti vanhu vagare pairi murugare pasina chokutyira.—Pisarema 37:11; 115:16.
Saka Mwari achazvifambisa sei kuti agadzirise zvinhu? Pamwe uchiri kuyeuka kuti nyaya yechipiri pane dzino dzakatevedzana yataura kuti zvinhu zvakawanda zvinotyisa zviri kuitika zvinoumba ‘chiratidzo chokuguma kwemamiriro ezvinhu.’ Jesu akati: “Pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti umambo hwaMwari hwava pedyo.” (Mateu 24:3; Ruka 21:31) Umambo hwaMwari, kureva hurumende yake yaakagadza kudenga, huchagadzirisa zvinhu zvakawanda pano panyika, kunyange kupedza njodzi dzinongoitika dzoga. Kunyange zvazvo Jehovha Mwari aine simba rokuti aite izvozvo pachake, akasarudza kupa Mwanakomana wake basa iroro. Achitaura nezveMwanakomana uyu, muprofita Dhanieri akati: “Akapiwa ushe nokukudzwa noumambo, kuti vanhu, mapoka emarudzi nemitauro vamushumire vose.”—Dhanieri 7:14.
Mwanakomana waMwari Jesu Kristu akapiwa simba rokuti agadzirise zvinhu zvose zvinodiwa kuti panyika panakidze kugara. Makore 2 000 akapfuura Jesu paaiva pasi pano, akangopa vanhu nzwisa kuti aratidze kuti ane simba rokupedza njodzi dzinoitika dzoga. Pane imwe nguva paaiva muchikepe muGungwa reGarireya nevadzidzi vake, “dutu rine simba kwazvo rakamuka, uye mafungu akaramba achipinda muchikepe, zvokuti chikepe chakanga chava kuda kuzara nemvura.” Vadzidzi vake vakavhunduka. Vava kutyira kuti pavo pangangovaperera, vakamutsa Jesu. Akaitei nazvo? Jesu “akatuka mhepo yacho, akati kugungwa: ‘Shii! Nyarara!’ Zvino mhepo yacho yakadzikama, kudzikama kukuru kukavapo.” Vadzidzi vake vakashamiswa nazvo ndokubvunza kuti: “Iyeyu anombova ani, nokuti kunyange mhepo negungwa zvinomuteerera?”—Mako 4:37-41.
Kubvira panguva iyoyo Jesu akakwira kudenga uye akapiwa simba rakakura nechiremera. SaMambo woUmambo hwaMwari, ane basa uye simba rokuita zvinhu zvose zvinodiwa kuitira kuti vanhu vave norugare panyika uye vasatya.
Asi sezvataona, matambudziko akawanda nenjodzi zvinokonzerwa uye zvinowedzerwa nevanhu vanongozvifunga ivo uye vane makaro. Umambo huchaitei nevanhu vakaoma musoro vasingadi kusiyana nemaitiro akadaro? Bhaibheri rinotaura nezvaIshe Jesu “achibva kudenga aine ngirozi dzake dzine simba ari mumurazvo womoto, sezvaanotsiva vaya vasingazivi Mwari nevaya vasingateereri mashoko akanaka pamusoro paShe wedu Jesu.” Chokwadi, ‘achaparadza vaya vanoparadza nyika.’—2 VaTesaronika 1:7, 8; Zvakazarurwa 11:18.
Pashure peizvi “Mambo wemadzimambo” uyu, Jesu Kristu achange ava kuratidza masimba ake akakwana okupedza njodzi dzinongoitika dzoga. (Zvakazarurwa 19:16) Achava nechokwadi chokuti vanhu vanozviisa pasi poUmambo hwake havana kana matambudziko avachasangana nawo. Achashandisa simba rake kuita kuti mamiriro okunze nemwaka zvibatsire vanhu pane kuvakuvadza. Zvichazoitika pakupedzisira ndezviya zvakagara zvavimbiswa naJehovha Mwari kuvanhu vake zvokuti: “Ndichakupaiwo mvura yenyu inonaya panguva yakakodzera, nyika yacho ichabereka zvibereko zvayo, uye miti yomusango ichabereka michero yayo.” (Revhitiko 26:4) Vanhu vachavaka dzimba vasingazotyiri kuti dzichaparadzwa nenjodzi. Bhaibheri rinoti: “Vachavaka dzimba vogaramo; vachadyara minda yemizambiringa vodya zvibereko zvayo.”—Isaya 65:21.
Sezvinongoitawo vanhu vakawanda, hapana mubvunzo kuti unoda chaizvo kuzorarama munyika inenge isisina njodzi dzinoparadza. Saka unofanira kuitei kuti uzova munyika iyoyo? Sezvo ‘vaya vasingazivi Mwari nevaya vasingateereri mashoko akanaka’ vasingazopindi munyika iri kuuya isina njodzi, zviri pachena kuti unofanira kudzidza nezvaMwari iye zvino wotsigira urongwa hwake hwokutonga nyika. Mwari anoda kuti timuzive uye titeerere mashoko akanaka oUmambo hwaakapa Mwanakomana wake.
Nzira yakanakisisa yokuti uite izvozvo ndeyokunyatsodzidza Bhaibheri. Rine mirayiridzo yezvaungaita kuti ukodzere kurarama munyika isina matambudziko ichange iripo panenge pava kutonga Umambo ihwohwo. Wadii kukumbira Zvapupu zvaJehovha kuti zvikubatsire kuona zvinodzidziswa neBhaibheri? Ndozvazvakatomirira. Iva nechokwadi chokuti kana ukashanda nesimba kuti uzive Mwari uye kuti uteerere mashoko akanaka, uchaona mashoko ari pana Zvirevo 1:33 achizadzika kwauri. Mashoko acho anoti: “Munhu anonditeerera achagara akachengeteka, asinganetseki nokutya dambudziko.”
Dzidza kuti ndeapi mashoko anobva kuna Mwari, nei tichifanira kuanzwa, uye zvaungaita.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI December 2011